ဘကကျောင်းများ ဖြုတ်ပစ်ပါက ကျေးလက်နေ လူတန်းစားများ လက်မှတ်ထိုးရာတွင် ကြက်ခြေခတ်ရသည့် ဘဝမျ?? - Yangon Media Group
ဘကကျောင်းများ ဖြုတ်ပစ်ပါက ကျေးလက်နေ လူတန်းစားများ လက်မှတ်ထိုးရာတွင် ကြက်ခြေခတ်ရသည့် ဘဝမျ??
ရန်ကုန်၊ နိုဝင်ဘာ ၂၃
ဘက ကျောင်းများ ဖြုတ်ပစ်မည်ဆိုပါက ဝေးလံသည့် တောရွာနေလူတန်းစားများ လက်မှတ်ထိုးရာတွင် ကြက် ခြေခတ်ရသည့်ဘဝမျိုး ပြန် ရောက်သွားလိမ့်မည်ဟု ပြည်ခိုင် ဖြိုးပါတီ၏ ဗဟိုကော်မတီဝင် ဦးလှသိန်းက ပြောသည်။ နိုဝင်ဘာ ၂၃ ရက်၊ ရန်ကုန် မြို့ သံလွင်လမ်းရှိ ပြည်ထောင်စု ကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီရုံးချုပ်တွင်ပြုလုပ်သည့် သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် အထက်ပါအတိုင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နိုဝင်ဘာ ၁၆ ရက်က ကျင်းပသည့် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် အမျိုးသား ပညာရေးမူဝါဒ ကော်မရှင်၏ ဒုတိယ ခြောက်လတာကာလ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ခဲ့မှု အစီရင်ခံစာနှင့်ပတ်သက်ပြီး မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး၊ မဲဆန္ဒနယ်အမှတ် (၆)မှ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါက်တာကြွယ်ကြွယ်က ဘုန်းတော်ကြီးသင် ပညာရေး ကျောင်းများသည် သံဃာတော်များအပေါ် ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေ သည့်အတွက် အခြေခံပညာကျောင်း ဖွင့်လှစ်ပြီးသောရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာများတွင် ဘကကျောင်းများကို လျှော့ချပိတ်သိမ်းသင့်ကြောင်း ဆွေးနွေးခဲ့သည်။
ဘကကျောင်းများမှာ စာမတတ်သူပပျောက်ရေးတွင် အဓိကမဏ္ဍိုင်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း၊ ပညာရေးကဏ္ဍနှင့် ပတ်သက်ပြီး နိုင်ငံအနှံ့အပြားတွင် အစိုးရအ နေဖြင့် တာဝန်မယူနိုင်သေးကြောင်း၊ ဝေးလံခေါင်သီသည့် ကျေးလက်များတွင် စာသင်ကျောင်းများဖွင့် လှစ်နိုင်စွမ်းမရှိသေးကြောင်း၊ စာသင်ကျောင်းအားလုံး ဖွင့်နိုင် မည်ဆိုပါကလည်း စီးပွားရေးအ ခြေအနေကြောင့် ငွေကြေးမတတ်နိုင်သည့် ကလေးငယ်များရှိနေဦးမည်ဖြစ်ရာ ဘကကျောင်းများမှာ ဆက်လက်တည်ရှိနေမှသာ အဆင်ပြေနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဦးလှသိန်းက သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၌ နိုင်ငံအတွင်းလတ်တလော ဖြစ်ပေါ်နေသည့် ကိစ္စရပ်များအ ပေါ် ပြည်ခိုင်ဖြိုးပါတီ၏သဘောထားများရှင်းလင်းရာတွင်ထည့် သွင်းပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
”ဒါတွေကို ဖြုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင် တစ်ချိန်တစ်ခါမှာ ဒီတောရွာကလူတွေဟာ အရင်တုန်းက ဂျပန်ခေတ်တို့၊ လွတ်လပ်ရေးမရခင်ကခေတ်တို့လို လက်မှတ်ထိုးတဲ့အခါ ကြက်ခြေခတ်ရတဲ့အဆင့် ကို ပြန်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ၎င်းကပြောသည်။ ယင်းအပြင် ဆင်းရဲသည့် ကလေးငယ်များအတွက် ဘက ကျောင်းများလိုအပ်ကြောင်း အမျိုးသားပညာရေးမူဝါ ကော်မ ရှင်ဒုဥက္ကဋ္ဌ ဦးညီငယ်လှက ပြည် ထောင်စုလွှတ်တော် အစည်းအဝေး တွင် ပြောကြားထားသည်။ တစ်နိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာ ဖြင့် ၂ဝ၁၆-၂ဝ၁၇ ပညာသင်နှစ် အထိ ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေး ကျောင်းပေါင်း ၁၅၇၆ ကျောင်းအထိ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားလျက်ရှိ ကြောင်း သိရသည်။
ကြားဖြတ်အနိုင်ရ ကျိုင်းတုံလွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်အား ကန့်ကွက်သည့် ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်၏ အယူ?
နှစ်ပေါင်း ၁ဝဝ ကျော် သက်တမ်းရှိ ပေပုရပိုက်များ ကြာရှည်ခံရေးအတွက် နိုင်ငံခြားပညာရှင် ဦးဆေ??
အမေရိကန်နှင့် ကုန်သွယ်ရေး ဆွေးနွေးပွဲများအတွက် တရုတ်နိုင်ငံက စိတ်ဝင်စားမှု မရှိတော့ကြောင်?
ရေခဲတောင်မှာ သွားရောက် ရိုက်ကူးမည့် ရုပ်ရှင် ဇာတ်ကားကြီးကိုတော့ နောက်နှစ်မှပဲ ရိုက်ကူးဖြ??